Faniriana amin'ny famoahana aotra: fiaramanidina amin'ny ho avy | Vaovao Aviation
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Faniriana famoahana aotra: fiaramanidina amin'ny ho avy
fiaramanidina amin'ny ho avy
Ny filoha lefitra ho an'ny Tetikasa fiaramanidina Zero-Emission ao amin'ny Airbus, Glen Llewellyn, dia niresaka nandritra ny hetsika CAPA Live momba ny zavatra ataon'izy ireo ao anatin'ny tetikasan'izy ireo ZEROe.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nametraka tanjona kendrena mahery setra amin'ny resaka fihenan'ny emissions CO2.
Airbus dia mijery izay fandaminana tsara indrindra ho an'ny fiaramanidina ara-barotra tsy misy emission.
Ny fanaingoana mahazatra toy ny fantsom-borona sy elatra misy turbofan ary rafitra fampiroboroboana turboprop izay ampandehanan'ny hidrôzenina mifanohitra amin'ny vatan'ny elatra mifangaro dia samy hafa be amin'ny famolavolana fiaramanidina ankapobeny.
Fiaramanidina miisa telo no nambaran'ny Airbus tamin'ny volana septambra 2020. Ireo fiaramanidina ho avy ireo dia ampahany amin'ny andian-kevitra izay tadiavin'ny Airbus mba hamaritana hoe inona ny fikirakirana tsara indrindra azon'izy ireo entina amin'ny tsena amin'ny 2035 ho aotra voalohany -misy fiaramanidina ara-barotra.
Llewellyn dia nitohy nizara ireto fampahalalana manaraka ireto nandritra ny CAPA - Ivotoerana fiaramanidina hetsika Nanazava ny fikirakira mahazatra toy ny fantsom-pifandraisana sy ny elatra miaraka amin'ny turbofan sy ny rafitra turboprop propulsion mandeha amin'ny hidrôzenina mifanohitra amin'ny vatan'ny elatra mifangaro izay samy hafa be amin'ny famolavolana fiaramanidina ankapobeny. Notohizany hoe:
The vatan'ny elatra mifangaro dia tena mahay manampy antsika hahatakatra izay mety ho fatran'ny hidrôzenina farany ambony amin'ny ho avy satria ny vatan'ny elatra mifangaro dia mitondra vahaolana amin'ny fitehirizana angovo toa ny hidrôzenina izay mitaky volabe kokoa noho ny solitany. Ary noho izany, azo jerena ho toy ny faniriana farany eo amin'ny lafiny fahombiazan'ny fiaramanidina hidrôzenina.
Ny zavatra mety hoentintsika manompo amin'ny 2035, na izany aza, dia mety ho izay hitanao… amin'ny resaka fantsom-pandrika sy elatra. Ary hiresaka kely momba ny maritrano sy ny sasany amin'ireo teknolojia ao anatin'ireo fiaramanidina ireo isika aorian'izay.
Voalohany indrindra, ny tiako hozaraina aminao dia ny antony kely mifantoka amin'ny antony mahatonga ny Airbus hifantoka amin'izany, ny antony mahatonga ny Airbus manosika ireo vahaolana ireo, ary maninona isika no manana faniriana hitondra ny fiaramanidina zeroemission voalohany hamidy amin'ny 2035.
Raha ny resaka sahan-kevitra sy ny fanampiana manazava ny paikady Airbus dia heveriko fa maro aminareo no hahafantatra fa ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nametraka lasibatra mahery setra tokoa amin'ny resaka fihenan'ny emissions CO2. Ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireo tanjona kendrena ireo dia miresaka momba ny fihenan'ny 50% amin'ny haavon'ny 2005 ny famoahana CO2 hatramin'ny 2050. Ary fantatray fa ny biofuel dia azo antoka fa ampahany amin'ny vahaolana.
Ny fantatsika ihany koa dia mila mitondra solika synthetic an-tserasera mifototra amin'ny fanavaozana isika mba handrosoana bebe kokoa sy hanafainganana ny tetezamita natombontsika. Ary ny lasantsy synthetic dia tafiditra ao anaty sokajy roa.